Itoobiya oo fashilisay weerar Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer isku dayday inay gudaha u gashay Itoobiya, balse u suurtagali waysay illaa hadda.
JIGJIGA, Itoobiya - Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashilisay isku-day ay xubno katirsan Al-Shabaab ku doonayeen inay gudaha ugu galaan dalkeeda.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee dowlada deegaanka Soomaalida, ayaa lagu sheegay in horaantii Todobaadkii tagey la qabtay laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanata Soomaaliya.
“Laba qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo isku dayay inay ka soo galaan dhinaca Soomaaliya ayaa lagu qabtay deegaanka Mustaxiil ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Waxaa la sheegyaa in hal qof uu ku dhintay is-rasaasayn dhex martay ragga la tuhunsan yahay in ay ka tirsayihiin Al-Shabaab iyo Ciidamada ilaalada xadka Itoobiya, iyadoo mid kalena uu ku dhaawacmay kadibna gacanta lagu dhigay.
Itoobiya ayaa horay u sheegtay in la xiray tobanaan qof oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiinn kooxaha xagjiriinta ah ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya, kuwaas oo doonayay in ay gudaha u galaan dalka.
Itoobiya ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ay Ciidamadu ka joogaan gudaha Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah AMMISOM, iyadoo askrateeda ay inta ugu badan ay ku sugan yihiin gobolada Baay iyo Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa jira Ciidamo aad u badan oo Itoobiyaan ah oo aan AMISOM kamid ahayn, kuwaasoo u jooga dalka dano gaar ah, waxaana jirin dhibaatooyinka ay geystaan cid lagula xisaabtamo.
0 Comments Topics: al-shabaab itoobiya soomaaliya